Mmanụ ụgbọala Ọkwa mmetụta Manufacturers - China mmanụ ụgbọala Ọkwa mmetụta Factory & Suppliers
Mmanụ ụgbọala Ọkwa mmetụta JT606
Mmanụ ụgbọala Ọkwa mmetụta JT606D
Mmanụ ụgbọala Ọkwa mmetụta JT606X
Mmanụ ụgbọala Ọkwa mmetụta JT550
Patented Product, Best Choice N'ihi Remote Fuel Oriri Monitoring.
JT606 usoro elu kpọmkwem mmanụ ụgbọala larịị mmetụta e mere maka ime lezie management na mmanụ ụgbọala oriri. Ọ na-mepụtara site Jointech n'adabereghị, jikọtara n'elu ihe mmetụta technology na ụwa, na na a otutu patented teknụzụ. Ọ nwere ike nọgidere ịchọpụta mmiri mmiri larịị na elu mkpebi (<1mm), nakwa dị ka ịhazie ogologo dabara dị iche iche mmanụ tankị na ntụpọ, na dochie mbụ ụgbọ mmanụ ụgbọala larịị mmetụta jikọọ mbụ mmanụ ụgbọala mita.
Unique Design, Leading ọchịchọ
Dị ka ọtụtụ afọ ahụmahụ na ntụpọ echichi, mgbe nile mma, nke a nwee JT606 nwere ike ikike imeghari dị iche iche mgbagwoju anya ulo oru na Ngwuputa gburugburu ebe obibi.
Nwere ike bipu Fuel mmetụta ike-ebipụ dị ka mmanụ ụgbọala tank size na saịtị Zere tolerances mere site na-ezighị ezi size
High-nkenke Ịghọta ziri ezi bụ ihe na-erughị 1mm The mmetụta nwere ike ịmata larịị mmajijiji erughị 1mm
Simple echichi patented imewe mfe arịọnụ flanges Wụnye ihe mmetụta na-adịghị mkpa ọzọ na iri na abuo ịghasa oghere Press button maka zuru na efu mmezi na saịtị
Wide input voltaji, elu na circuit nchedo 4-70V obosara input voltaji nso, jide n'aka na ihe mmetụta bụghị n'okpuru nduzi nke input voltaji. Multi circuit nchedo, agbara njikọ nchedo, obere sekit nchebe.
Multi-mgbaàmà mmepụta voltaji mmepụta (0-5V), ugbu a mmepụta (4-20mA) eguzogide mmepụta (0-500Ω) Digital mgbaàmà mmepụta: RS232, RS485 Zute ime nlekota na ịchịkwa mgbe ụgbọala na ụgbọala nlele
More Than Hardware, More Ahụmahụ N'ihi Ịkekọrịta
Jointech bụghị naanị mmanụ ụgbọala larịị mmetụta emeputa, ma na-enye mmanụ ụgbọala nlekota akpanam oversea ahịa ọtụtụ afọ. Jointech ka akwakọba ọgaranya ahụmahụ na ntụpọ echichi, mmetụta tụnyere, azụ n'ala nhazi, na akụkọ analysis.
On saịtị echichi na-elekọta
The ngwaọrụ mwekota ahụmahụ nkekọrịta
Mmanụ ụgbọala oriri data analysis na akụkọ mmepụta ahụmahụ nkekọrịta
JT606 na ọtụtụ-eji maka dị iche iche iche iche nke ugbo ala na ígwè ọrụ ndị na ụwa.
Lọjistik njem ụgbọala